बुजुर्ग / कुनै पनि उमेरका लागि क्याप्शन भिडियो फोन र क्याप्शन फोन - Konnekt
Konnekt क्याप्सन भिडियोफोन
अन्त्यमा। श्रवण हानि को लागी सबै उमेर को लागी एक सजिलो फोन।
क्याप्सनहरू। छिटो, निजी, सटीक। बहु भाषाहरू।
ठूलो, स्पष्ट आवाज। ह्यान्ड्स-फ्रि, वा परम्परागत ह्यान्डसेट समात्दै।
ओठहरू पढ्नुहोस्, अनुहारको हावभाव। सा sign्केतिक भाषा प्रयोग गर्नुहोस्।
अर्को व्यक्तिको शब्दहरू, र वैकल्पिक रूपमा तपाईंको आफ्नै शब्दहरू, पाठ सन्देशहरूको रूपमा पढ्नुहोस्।
क्याप्शन भिडियो कलहरूले ओठको पठन सक्षम पार्दछ
परिवार, साथीहरू र सहकर्मीहरूसँग आमनेसामने कुरा गर्नुहोस्
क्याप्सनहरू स्वचालित रूपमा सुरु गर्नुहोस् (कुनै बटनहरू छैन, अपरेटरहरू छैनन्) हुड अन्तर्गत स्काइप धन्यवाद
ओठहरू पढ्नुहोस् र अनुहारको भाव; साईन भाषा वा फ्ल्यास कार्डहरू प्रयोग गर्नुहोस्
मद्दतको लागि अनुहार आमनेसाम देखाइएको कलहरू * सामाजिक अलगाव र डिप्रेशन रोक्न
अविश्वसनीय सजिलो प्रयोग गर्न, थप संज्ञानात्मक र गतिशीलता कमजोरीहरूको लागि विकल्पहरू
नियमित फोन कल क्याप्शन छ
बहिरापनको लागि कम सुनुवाइको लागि सबै उमेरहरूको लागि आदर्श
बनाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् नियमित फोन कलहरू, cm सेमी अग्लो सम्म ठूला क्याप्शनको साथ
एक स्पर्श कल गर्न वा जवाफ दिन, वा ठूलो संख्यात्मक कीपैड * को प्रयोग गरेर डायल गर्न।
अतिरिक्त चर्को; हाम्रो संचालित बाह्य स्पिकरको साथ SUPER ठूलो
एक स्पर्श: नाम बटन थिच्नुहोस्, वा नम्बर प्रविष्ट गर्न फोन थिच्नुहोस्
प्रतीक्षा: अर्को व्यक्तिले नियमित फोन वा पीसी / ट्याब्लेटमा जवाफ दिन सक्छ
पढ्नुहोस्: क्याप्शनहरू स्वचालित रूपमा सुरु हुन्छन्, तपाईंको भाषामा
Konnekt क्याप्शन फोन बनाम पुरानो क्याप्शन फोनहरू
। भिडियो कलहरू र फोन कलहरू
Sign ओठ पढ्ने, सा sign्केतिक भाषा समर्थन गर्दछ
• द्रुत, निजी क्याप्शन; कुनै अपरेटर छैन
• कुनै फोन सेवा आवश्यक छैन; मात्र इन्टरनेट
• ठूला क्याप्शन, बहु भाषाहरू
• निरन्तर समर्थन
अपरेटर क्याप्शनको साथ पुरानो फोन
• फोन कल मात्र; कुनै भिडियो छैन
• कुनै ओठ पढ्ने वा साईन भाषा
Human एक मानव तपाईंको कल सुन्छ
A फोन सेवा र ईन्टरनेटको आवश्यकता छ
English केवल अंग्रेजीमा क्याप्शन
• संयुक्त राज्य अमेरिका मार्फत अस्थायी समर्थन
अद्यावधिक गरिएको! छनौट गाइड
हाम्रो तुलना तालिका डाउनलोड गर्नुहोस् र क्याप्शन फोन छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई उत्तम सूट गर्दछ।
तिनीहरूले तपाईंलाई बोलाउछन्: अर्को व्यक्ति या त तपाईंको नम्बर कल गर्दछ, वा तपाईंलाई स्काईपमा कल गर्दछ (देखाईएको)
अन्य कोठा: बत्तीहरू खोलिएका छन्, वा तपाईंको जेब उपकरण कम्पन हुन्छ (दुबै वैकल्पिक)
फोन कीपैड डायलर
कीप्याड डायलर * प्रयोग गरेर सजिलै फोन नम्बर डायल गर्नुहोस्।
कलको समयमा DTMF टोनहरू पठाउनुहोस्: "... को लागी १ थिच्नुहोस् ..."
* कीप्याड डायलर समावेशीकरण वैकल्पिक हो र सबै देशहरूमा उपलब्ध छैन। कृपया सोध्नुहोस्, यदि आवश्यक छ भने।
यो कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे अधिक
के नियमित र आपतकालीन फोन नम्बरहरू कल गर्न सजिलो छ? कसरी?
के मानिसहरूले मलाई कल गर्न सक्दछन्? कसरी? कुन नम्बरमा?
मलाई यस बारे अधिक बताउनुहोस् Konnekt क्याप्शन भिडियो भिडियो?
के क्याप्शन गुणस्तर राम्रो छ?
यसले श्रवण / दृष्टि / मेमोरी हराउने, कमजोर गतिशीलतासँग कसरी मद्दत गर्दछ?
हो र हो। त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन् तपाईले नियमित टेलिफोन नम्बर कल गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंले संख्यात्मक कीप्याडमा डायल गर्न चाहानु भएको फोन नम्बर मात्र प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यसमा ठूलो बटनहरू छन्। तपाईंले सम्भवतः अंकहरू देख्न र हिट गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले आफ्नो चश्मा बिर्सनुभयो भने पनि।
यदि अर्को व्यक्तिले उत्तर दियो भने, क्याप्शन सुरु हुन्छ स्वतः. प्रेस गर्न कुनै बटन छैन। कुनै अपरेटरको लागि कुर्नु हुँदैन।
तपाईं आफ्नो साथीहरू, परिवार, सहयोगीहरू र एक सम्पर्क कल बटनमा महत्त्वपूर्ण सम्पर्कहरू राख्न सक्नुहुनेछ।
प्रत्येक कल बटन inches इन्च चौडा हुन्छ। अक्षरहरू धेरै ठूला छन् ... करीव inches इन्च लम्बाई।
तपाईंको भिडियोफोन पहिले नै सेटअप गरिएको बटनहरूको साथ आउँदछ (तपाईंको लागि निजीकृत)।
यदि तपाईं अधिक बटन चाहनुहुन्छ, वा बटन परिवर्तन वा हटाउन आवश्यक छ भने, हामीलाई भन्नुहोस्। हामी तपाईको लागि गर्छौं, कसैलाई पनि आवाश्यक पर्दैन।
प्रत्येक बटनले डायल गर्न सक्दछ, क्रममा,5फोन नम्बर वा5स्काइप नामहरू, वा फोन नम्बरहरू र स्काईप नामहरूको मिश्रण सम्म।
उदाहरण को लागी, तपाईसंग BOB बटन हुन सक्छ जसले बबलाई स्काईपमा पहिले बोलाउँदछ ताकि तपाई आमनेसामने कुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि बबको काम नम्बरमा कल गर्नुहोस्, र बबलाई घरमा कल गर्नुहोस्।
तपाईंसँग एक फ्रेन्ड्स बटन हुन सक्छ जुन तपाईंको जीवनमा तपाईंको सबै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई जवाफ दिन्छ, एक-एक गर्दैमा एक जनाले जवाफ दिदैन, वा तपाईं एक सहयोगी बटन पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको ख्याल गर्ने calls जनासम्म कल गर्दछ।
वा तपाईसँग एएनईई बटन हुन सक्छ जुन केवल उनको घरको फोनमा एनीलाई कल गर्दछ।
आपतकाल सजीलै कल गर्नुहोस्
अष्ट्रेलियाको लागि विकल्प (कल गर्न ०००), बेलायत र केही अन्य देशहरू: सरल रूपमा हिट आपतकालीन आपतकालीन सेवाहरू कल गर्न कल बटन, वा आपतकालीन नम्बर डायल गर्नुहोस्।
विकल्प २: हिट एक सहायता गर्नुहोस् or मुसीबत एक पछि अर्को people व्यक्ति वा फोन नम्बरहरू डायल गर्न कल गर्नुहोस्।
आपतकालीन सेवाहरू वा आपतकालीन सम्पर्कहरूसँग तपाईंको कुराकानी क्याप्शन हुनेछ। स्वचालित रूपमा
असीमित कलहरू। कुनै आश्चर्य छैन।
यो Konnekt सदस्यता संग आउँछ ल्यान्डलाइनमा असीमित कलहरू र / वा मोबाइल फोनहरू, तपाईंको योजनामा ​​निर्भर गर्दै।
क्याप्शन नि: शुल्क छन्। क्याप्शनका लागि तपाईंले केही पनि तिर्नु पर्दैन।
र यदि तपाईंले यो छुटाउनुभयो: क्याप्सनहरू छिटो, सटीक, र स्वचालित रूपमा सुरु हुनेछ। प्रेस गर्न कुनै बटन छैन.
हो। व्यक्तिले तपाईंलाई दुई तरिकामा कल गर्न सक्दछन्: स्काईप मार्फत भिडियो कलहरू, र तपाईंको नयाँ फोन नम्बरमा नियमित टेलिफोन कलहरू। दुबै हुनेछ क्याप्शन स्वत:.
स्काईप कलहरू प्राप्त गर्दै
तपाईंलाई भिडियो कलको साथ कल गर्न, तपाईंको सम्पर्कहरूलाई उनीहरूको मोबाइल, आईप्याड / ट्याब्लेट वा कम्प्युटरको लागि नि: शुल्क स्काईप अनुप्रयोग चाहिन्छ। स्काइप अनुप्रयोग डाउनलोड र स्थापना गर्नका लागि नि: शुल्क छ, र तपाईंलाई स्काईप-टु-स्काइप कल गर्न स्वतन्त्र छ। यसले थोरै मात्र इन्टरनेट डेटा प्रयोग गर्दछ। यो फेसटाइम, WhatsApp, Viber वा फेसबुक मेसेन्जर जस्तै धेरै छ। तिनीहरूले स्काईप सुरु गर्नको लागि स्काईप आईकनमा ट्याप गर्छन्, तपाईंको नाममा ट्याप गर्नुहोस्, र भिडियो कल सुरू गर्न भिडियो क्यामेरा प्रतिमामा ट्याप गर्नुहोस् (यदि उनीहरू तपाईंसँग आमनेसाम कुरा गर्न चाहन्छन्) वा फोन आइकनमा ट्याप गर्न अडियो कल सुरू गर्नुहोस्।
केवल दोहोर्याउन: यदि तिनीहरूले तपाईंलाई स्काईप प्रयोग गरेर कल गरे भने, तपाईंलाई तिनीहरूको कल नि: शुल्क हुनेछ। यो तिनीहरूको ईन्टरनेट डाटा को एक सानो प्रयोग गर्दछ।
जब तपाईं जवाफ दिनुहुन्छ, क्याप्शन सुरु हुन्छ, स्वचालित रूपमा। प्रेस गर्न कुनै बटन छैन.
नियमित फोन कलहरू प्राप्त गर्दै
प्रत्येक भिडियोफोन आफ्नो फोन नम्बरको साथ आउँदछ। अष्ट्रेलियामा, उदाहरणका लागि तपाईसँग ० 02, ० 03, ० 07 वा ० 08 देखि सुरू हुने नम्बरको छनौट हुन सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा तपाईसँग व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि क्षेत्र कोड हुन सक्छ। फोन नम्बर धेरै देशहरूको लागि उपलब्ध छन् (मात्र सोध्नुहोस्)।
तपाईंको कलरहरूको लागि तपाईंको भिडीफोन फोन नम्बर कल गर्नु कुनै अस्ट्रेलियाई फोन नम्बर कल गर्नु जत्तिकै हुनेछ: उनीहरूले तपाईंको नम्बर डायल गर्नेछन्, तपाईं जवाफ दिनुहुनेछ, र तपाईं कुरा गर्नुहुनेछ। र क्याप्शन सुरु हुन्छ, स्वचालित रूपमा। प्रेस गर्न कुनै बटन छैन.
तपाईंको पुरानो फोन नम्बरहरू भिडियोफोनमा डाइभर्ट गर्दै
तपाईं आफ्नो भिडियो फोन नम्बर बन्नको लागि तपाईंको अवस्थित फोन नम्बर "पोर्ट" (सार्न) सक्नुहुन्न। यसको सट्टामा, आफ्ना सम्पर्कहरूलाई तपाईंको नयाँ भिडियोफोन नम्बर दिनुहोस्।
तपाईं कल-फर्वार्ड (डायभर्ट) तपाईंको ल्यान्डलाइन र / वा मोबाइल फोन सेवाहरू गर्न सक्नुहुनेछ। जब सम्पर्कले तपाईंलाई कल गर्दछ, भिडियोफोन बज्नेछ। जब तपाईं जवाफ दिनुहुन्छ, तपाईं क्याप्शन हुनेछ।
कल अग्रेषण एक लागत सहन सक्दछ, तपाईंको अवस्थित फोन योजना को आधार मा। तपाईंको अवस्थित फोन सेवा प्रदायकको साथ जाँच गर्नुहोस्।
तपाईंको फोन सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा कल फर्वार्डिंग सेट अप गर्न यो गर्नुहोस्:
टेलस्ट्रा फिक्स्ड फोन सेवाहरूको लागि (ल्यान्डलाईनहरू): फोन लिनुहोस्, डायल टोनको लागि सुन्नुहोस्, *21 डायल गर्नुहोस्, तपाईंको भिडियोफोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्, प्रेस # र ह्या hang अप गर्नुहोस्।
Optus फिक्स्ड फोन सेवाहरूको लागि: फोन लिनुहोस्, डायल टोनको लागि सुन्नुहोस्, *7dial डायल गर्नुहोस्, तपाईंको भिडियोफोन नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्, दुई छोटो बीपको लागि पर्खनुहोस्, ह्या hang अप गर्नुहोस्।
सबै मोबाइल फोन सेवाहरूको लागि: फोन सेटिंग्समा जानुहोस् वा तपाईंको मोबाइल फोनमा सेटिंग्स कल गर्नुहोस् वा…
Telstra र Optus उपभोक्ता-मोबाइल फोन सेवाहरु को लागी: डायल * *61 *, तपाइँको Videophone नम्बर, * * 10#, त्यसपछि थिच्नुहोस् पठाउनुहोस् वा कल गर्नुहोस्। (यो तपाइँको मोबाइल फोन मा १० सेकेन्ड को लागी पहिलो रिंगि after पछि कल मोड्नेछ, जो एक सतर्कता उपकरण को रूप मा तपाइँको मोबाइल फोन को उपयोग को लागी एकदम सही छ)।
भोडाफोन मोबाइल फोन सेवाहरु को लागी: या त तपाइँको भोडाफोन स्मार्ट फर्स्ट एप को उपयोग गर्नुहोस्, वा मेरो भोडाफोन अनलाइन को उपयोग गर्नुहोस्, वा डायल * * 21 *, तपाइँको वीडियोफोन नम्बर, #, तब पठाउनुहोस् वा कल गर्नुहोस्।
सबै कल तपाईंको भिडियोफोनमा डाइभर्ट हुनेछ क्याप्सन। स्वचालित रूपमा
यो Konnekt क्याप्शन भिडियो भिडियोले अधिक धेरै प्रदान गर्दछ:
विशाल 15 इन्च स्क्रीन। एक आईप्याड / ट्याब्लेट को क्षेत्र को बारे मा दुई पटक। धेरै पटक मोबाईल फोन स्क्रिन भन्दा ठूलो। त्यसकारण अनुहारहरू हेर्न, ओठहरू पढ्न, क्याप्शनहरू पढ्न, अनुहारको भाव अभिव्यक्ति गर्न यो धेरै सजिलो छ।
वैकल्पिक ह्यान्डसेट। तपाईं ह्यान्ड्स-फ्री कुरा गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं आफ्नो वैकल्पिक ह्यान्डसेटमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं आफ्नो कान र मुखमा समात्नुहुन्छ पारंपरिक टेलिफोन जस्तो।
ठूलो क्याप्शन। क्याप्शनहरू LARGE छन्। फन्ट आकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यहाँ सम्म कि पूर्वनिर्धारित पनि विकल्प भन्दा धेरै ठूलो छ।
क्याप्सन खाली गर्नुहोस्। भिडियो कलको क्रममा, क्याप्सन भिडियो फ्रेमको एक तर्फ बन्द छन्। त्यसोभए उनीहरू पढ्न सजिलो हुनेछ, सफा हुनेछ, र तपाईंको सम्पर्कको अनुहारमा सुपरिम्पेस्ड हुँदैन ... जसको मतलब तपाईको ओठको पठनमा बाधा उत्पन्न हुँदैन।
वैकल्पिक स्थानीय क्याप्शनहरू। तपाईंको आफ्नै शब्दहरू पनि हेर्नुहोस्।
प्रयोग गर्न सजिलो। भिडियोफोनले भिडियो र अडियो कलिंग सरल गर्दछ, र स्वचालित क्याप्शन थप गर्दछ।
6 -इन्च बटनहरू। कल बटनहरू inches इन्च चौडा हुन्छन्, ताकि तपाईले पत्ता लगाउन र प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले आफ्नो चश्मा बिर्सनुभयो भने, वा तपाईंलाई द्रुत मद्दत चाहियो भने पनि।
यो ठूलो छ। के तपाइँसँग सुन्ने क्षमता छ? भिडियोफोनका जुम्ल्याहा आन्तरिक स्पिकरहरू हुन् वास्तविक शंकु स्पिकर। प्रायः मोबाईल, ट्याब्लेट र ल्यापटपहरूमा तपाईले पाउनुहुने थोरै बज्जी स्पिकरहरू होइन।
यो SUPER चर्को आवाजमा जान सक्छ। हामी एक पावर्ड बाह्य स्पिकर समावेश गर्न सक्छौं जुन तपाईं नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ कि यति जोडले जान सक्नुहुन्छ, यसले एक वा दुई कोठा टाढा सुतेको व्यक्तिलाई जगाउँदछ!
दृश्य घण्टी। यसले फ्ल्यास गर्न सक्दछ, पॉकेट भाइब्रेट * लाई बज गर्न सक्दछ, वा अन्य कोठामा बत्तीहरू अन गर्न सक्दछ * जब यो बजुन्छ। कुनै अधिक छुटेका कलहरू वा टेलिफोन-ट्याग खेलिरहेका छैनन्। * अतिरिक्त हार्डवेयर आवश्यक छ।
गोपनीयता विकल्प। तपाईंसँग ज्ञात सम्पर्कहरूबाट मात्र आगमन कलहरूलाई अनुमति दिने विकल्प छ। याद राख्नुहोस्: यो विकल्प मात्र हो। यो उनीहरुका लागि उपयोगी छ जो घोटालाको शिकार हुन सक्छन्, वा टेलमार्केटर्स वा अनावश्यक "साथीहरू" बाट लुक्न चाहन्छन्।
इन्टरनेट। अष्ट्रेलियामा, Konnekt तपाइँको लागी इन्टरनेट को सेट अप र प्रबंधन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो किन? ठिक छ, यदि हामी मोडेम / राउटर उपकरणहरू प्रदान गर्दछौं भने हामी यसको हेरचाह गर्न सक्दछौं। हामी यसको लागि जिम्मेवार छौं, र हामी कुनै पनि समस्याहरू समाधान गर्छौं। भिडिओफोनले यसलाई हरेक रात पुन: स्टार्ट गर्न सक्दछ, यसलाई विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्न। र त्यो मोडेम / राउटर हातले छनौट गरिएको छ, त्यसैले हामी यसलाई राम्ररी जान्दछौं ... यो एक अति-विश्वसनीय उपकरण हो जुन केवल कार्य गरिरहन्छ ... यो सस्तो पकेट मोडेम होइन। तर यदि लागत एक मुद्दा हो भने, हामी तपाईंलाई कम लागत इन्टर्नेट सेवामा देखाउन सक्छौं जुन तपाईं आफैले व्यवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ, या त हाम्रो मोडेम / राउटर वा तपाईंको आफ्नै साथ।
शून्य सेट अप। भिडिओफोनलाई मात्र बाकसबाट बाहिर लिनु पर्छ र टेबलमा अडिनु पर्छ। हामी यसलाई डेलिभर गर्नु अघि कुञ्जी सम्पर्कहरूसँग निजीकृत गर्दछौं, र यसलाई तपाईंको वाई-फाई संकेत पत्ता लगाउन र कन्फिगर गर्न स्वचालित रूपमा कन्फिगर गर्दछ। वा यो नियमित ल्यान केबल मार्फत जडान हुन सक्छ। सबै भन्दा राम्रो, यदि तपाइँ कुनै परिवर्तन वा थप गर्न आवश्यक छ, बस हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, र ती परिवर्तनहरू कसैलाई आवाश्यक आवश्यकता बिना, र तपाइँले भिडियोफोनमा जे पनि गर्न केही नगरी हुनुहुनेछ।
अक्षमता विकल्पहरू। हामीसँग कम दृष्टि, गतिशीलता सीमितता, कमजोर दक्षता, मेमोरी गुमाउने, मस्तिष्कमा चोट लागेका, र, निश्चित रूपमा, बहिरापन वा श्रवण कमजोरी भएकाहरूलाई मद्दत गर्न विकल्प र सहयोगीहरूको लामो सूची छ। यदि तपाईं ओछ्यानमा बस्नुहुन्छ वा कुर्सी बाउन्ड हुनुहुन्छ भने, कुनै समस्या छैन: हामीसँग ओछ्यानमा चढ्ने कोष्ठकहरू रहेका ग्राहकहरू, वायरलेस माउस-अनुकूल कम्पनि poinिंग यन्त्रहरू प्रयोग गर्ने ग्राहकहरू, र पहुँच बटन प्रयोग गर्ने ग्राहकहरू (विशाल राउन्ड “जेली बीन) रंगीन बटन जुन कुनै तार छैन र उत्तर दिन वा कल गर्न सक्दछ जो टचस्क्रिन प्रयोग गर्न सक्दैनन्)। ओह, र टचस्क्रिन आफै प्रतिरोधात्मक छ त्यसैले यो ग्रहमा प्रायः सबै अन्य टचस्क्रीन विपरीत, तपाईं ब्याडियोफोनलाई ब्यान्डजेड हात, ग्लोभ, कृत्रिम, टेलिस्कोपिक वन्ड वा अरू केहिसँग अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वत: उत्तर, 2- तरीका भिडियो र 2- मार्ग अडियोको साथ। तर विश्वासनीय सम्पर्कहरूबाट मात्र तपाई नामांकन गर्नुहुन्छ। को लागी महान आपात स्थिति, जब तपाईं जवाफ दिन यो बनाउन सक्नुहुन्न।
IT समर्थन। यदि कुनै समस्याहरू छन् भने, हामी अष्ट्रेलियामा छौं र अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका र युके / युरोपमा हामीसँग समर्थन छ। तपाईं हामीसँग अनलाइन कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ (वेबमा), हामीलाई कल गर्नुहोस्, तपाईंको भिडियोफोनबाट क्याप्शनको साथ कल गर्नुहोस्, वा हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस्। यो प्राय: जसो इन्टरनेटको समस्या हो तर चिन्ता नलिनुहोस्, हामी तपाईंलाई जानका लागि मद्दत गर्नेछौं, यदि हामी तपाईंको लागि इन्टरनेटको प्रबन्ध गरिरहेका छैनौं भने पनि।
प्रबन्धित सेवा। हामी सबै कुराको ख्याल राख्छौं। र म सबै कुरा भन्न खोज्छु। भित्तामा माउन्ट गर्नु आवश्यक छ? हामी तपाईलाई कोष्ठकको साथ सहयोग गर्न सक्छौं। यसको लागि सानो तालिका चाहिन्छ? हामी तपाईंलाई पनि यसका साथ मद्दत गर्न सक्दछौं।
विश्वसनीयता। हाम्रा धेरैजसो प्रयोगकर्ताहरू विदेशबाट आएका छन् वा परिवारबाट अन्तर्राज्यीय छन् र सबै आईटी-प्रेमाको रूपमा छैनन्। भिडिओफोनले कार्य गरिरहनुपर्दछ! हामी यसलाई सुपर विश्वसनीय बनाउनको लागि एउटा झोला चलाउँछौं। केहि ट्रिकहरू हुड मुनि छन् ... हामी समस्याहरू टाढैबाट पत्ता लगाउँन सक्छौं, र केहि गल्ती भइरहेको बेलामा हामी सतर्क हुन्छौं ताकि तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पहिले समस्याको समाधान गर्न सक्छौं। सफ्टवेयर अद्यावधिकहरू चुपचाप, रातभरि, आशैंकित हुन्छन्। हाम्रा केहि तरिकाहरू स्पष्ट छैनन् ... उदाहरण को लागी, कसैलाई दुर्घटनावश वा जानाजानी यसलाई बन्द गर्नबाट रोक्न हामी पावर स्विच (हाम्रा ग्राहकहरु मध्ये धेरै मनपर्दो विकल्प) अक्षम गर्न सक्दछौं। र हाम्रा केही तरिकाहरू केवल सुपर शान्त छन्, वैकल्पिक पावर-आउटलेट कभरहरू जसले क्लीनरलाई अनप्लगबाट रोक्न मद्दत गर्दछ। एक उपकरण जुन तपाईं आफ्नो जीवनमा भरपर्दछ, बाह्य विश्वसँग जडानको लागि.
त्यहाँ एक महान भिडियो छ जुन यो सबै भन्छ, जुन मेरो मुटुमा पुग्यो:
अन्धोपनले तपाईंलाई चीजहरूबाट विच्छेदन गर्दछ।
बहिरापनले तपाईंलाई मान्छेबाट काट्छ।
त्यसैले तपाइँको Konnekt क्याप्सन भिडियोफोनले तपाईंलाई व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न मद्दत गर्दछ। आमने सामने, साथ साथै नियमित कलहरूका लागि।
र सबै क्याप्शन
१ फेब्रुअरी २०२० भन्दा पहिले क्याप्शन कसरी काम गर्‍यो
पुरानो लिगेसी क्याप्शनि phones फोनहरू १ फेब्रुअरी २०२० देखि राष्ट्रिय रिले सेवा (NRS) क्याप्सन सेवाबाट विच्छेदन गरिएको थियो र एक अस्थायी रूपमा एक किनारा सेवामा जडान भएको थियो। यदि रिले अफिसर उपलब्ध भए, अफिसरले उनीहरूले सुनेको कुरालाई "पुन: कुरा" गरे, आवाजबाट पाठमा रूपान्तरण गर्न। यदि त्यहाँ धेरै त्रुटिहरू भएनन्, र यदि ती त्रुटिहरू फेला पार्न सक्दछन् र तिनीहरूलाई द्रुत रूपमा सुधार गर्न सक्दछन् भने, तिनीहरूले त्रुटिहरू सच्याउँदछन्। अवश्य पनि, पुन: बोल्नु पर्ने र कुञ्जीपाटीमा त्रुटिहरू सुधार गर्न ए जोडिएको समय ढिलाइ। सकारात्मक कुरा यो हो कि शुद्धता प्राय: धेरै उच्च हुन्छ, विशेष गरी यदि स्पिकरले छिटो कुरा गर्दैन भने। उचित संज्ञा (गुन्नमट्टा जस्ता स्थानका नामहरू र रेगन जस्ता व्यक्तिहरूको नाम) प्रायः सुधार गरिएको थियो, तर यदि रिले अफिसरले ती ठाउँहरू चिनेका थिए र ती नामहरू हिज्जे गर्न सक्षम भए भने मात्र। रिले अफिसरहरू तालिम पाएका थिए र धेरैलाई सामान्य उच्चारणहरू सुन्ने बानी थियो।
कसरी तपाईंको क्याप्शन कार्य गर्दछ Konnekt
तपाईंको Konnekt क्याप्शन भिडियो भिडियोले स्काईपको छिटो, सही क्याप्शन सेवा भिडियो कलहरूको साथ साथै टेलिफोनबाट नियमित कलहरूको लागि प्रयोग गर्दछ। स्काइप माइक्रोसफ्टको स्वामित्वमा छ, जुन विश्वको सब भन्दा ठूलो कम्पनी हो। माइक्रोसफ्टले २०११ मा Skype..8.5 बिलियन अमेरिकी डलरको लागि स्काइप खरीद गर्‍यो। माइक्रोसफ्टले स्काइप अनुप्रयोगहरूलाई पूर्ण रूपमा पुन: विकसित गर्‍यो र २०१-2011-२०१ in मा सर्भर पूर्वाधार अपडेट गरियो। माइक्रोसफ्ट स्काइप मा भारी लगानी गर्न जारी छ र प्रत्येक हप्ता वा दुई मा एक अपडेट जारी, ताकि यो सुधार गर्न जारी छ।
December डिसेम्बर २०१3मा, स्काइपले संयुक्त राष्ट्रसंघको अपा International्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको शुभारंभको साथ मनाउन विश्वमा सामेल भयो प्रत्यक्ष कल क्याप्शन र उपशीर्षकहरू। तिनीहरूकोमा प्रेस विमोचन, स्काइपले घोषणा गर्‍यो कि क्याप्शन एक-मा-भिडियो भिडियो कलमा काम गर्दछ, कुनै पनि फोन नम्बरमा कल गर्दछ / साथै समूह कलहरूमा। प्रत्यक्ष क्याप्शनले तपाईंलाई अधिक समावेशी अनुभव प्रदान गर्दछ, विशेष गरी जो बहिरा वा सुन्न नसक्ने मानिसहरूका लागि।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि Konnekt माइक्रोसफ्ट वा स्काइप प्रतिनिधित्व गर्दैन।
स्काइप-आधारित क्याप्शनले कुनै पनि मानव प्रयोग गर्दैन। प्रत्यक्ष क्याप्शन हुन अनुकूलित छ छिटो, निरन्तर, र प्रासंगिक रूपमा अपडेट गरियो जसरी मानिसहरु बोल्छन्।
के गर्छ "प्रासंगिक रूपमा अपडेट गरियो" अर्थ? यसको मतलब यो हो कि तपाइँको साथीले वाक्य वा वाक्यांश समाप्त गर्ने क्रममा, अहिलेसम्म बोलेका सम्पूर्ण वाक्यांशको अर्थ विश्लेषण गरिने छ, र जहाँ सम्भव छ, क्याप्शनमा त्रुटिहरू प्रत्येक वाक्यको अन्त्यमा विभाजित दोस्रोमा सुधार गरिनेछ वा वाक्यांश! यो उत्तम उदाहरणको साथ चित्रण गरिएको छ।
तिम्रो साथी भन्छ,पीठो हुनेछ"तर क्याप्शनहरू देखाउँछन्"फूल हुने थियो"।
तपाईंको साथी भन्छ, "...यो केक नुस्खामा आवश्यक छ।"अहो, कन्टेक्स बेकिaking्ग छ। एक सुधार स्वतः हुन्छ, त्यसैले अब क्याप्शन देखाउँदछ "यो केक नुस्खामा आटा आवश्यक पर्दछ।"
तिम्रो साथी भन्छ,लाल"तर क्याप्शनहरू देखाउँछन्"नेतृत्व"।
तपाईंको साथी भन्छ, "...मेरो मनपर्ने रंग हो।"अहो, सन्दर्भ रंग हो। एक सुधार स्वतः हुन्छ, त्यसैले अब क्याप्शन देखाउँदछ "रातो मेरो मनपर्ने रंग हो."
सहि हुनुका साथै यो छिटो छ। धेरै छिटो। त्यहाँ पुन: बोल्ने, कुनै किबोर्ड सुधार, र विदेशी-एजेन्ट क्याप्शन केन्द्रहरूमा कुनै ट्रान्स-कन्टिनेन्टल लिंक छैन।
मा हाम्रो अनुभव मा Konnekt, स्काइप-आधारित क्याप्शनिंग आश्चर्यजनक रूपमा छिटो, छिटो, र धेरै सुविधाजनक छ। यो विशेष गरी द्रुत बोलीको साथ उत्कृष्ट देखिन्छ र केवल पछाडि ढल्दैन, त्यसैले अब तपाईं आफ्ना कलकर्तालाई ढिला बनाउन भन्नु पर्दैन। अवश्य पनि यो त्रुटि मुक्त हुनेछैन, र तपाईंले अझै केही मानिसहरूलाई स्पष्ट बोल्न सम्झाउनु आवश्यक पर्दछ, तर यो पनि पुरानो प्रणालीको कुरा हो।
हामीले गुगलको भ्वाइस-टु-टेक्स्ट (जो यसको शुद्धताका लागि प्रख्यात छ, सन्दर्भ-संवेदनशील क्याप्शनलाई पनि धन्यवाद छ) को साथ स्काईप-आधारित क्याप्शनको तुलना गरेका छौं। तिनीहरू तुलनायोग्य छन्। शुद्धता ध्वनिकीमा बढी निर्भर गर्दछ (जस्तै ट्रकको पृष्ठभूमि आवाज, यदि तपाईंले विन्डो खुला छोड्नुभयो र तपाईं व्यस्त सडकमा बस्नुहुन्छ) र व्यक्ति बोल्दै, क्याप्शन प्लेटफर्मको छनौट भन्दा।
हामीले हाम्रो आफ्नै निर्णयमा विश्वास गरेनौं, त्यसैले हामीले केहि विश्वासिलो व्यक्तिहरू (जसले सुन्ने शक्ति गुमाएका छ वा जसका परिवारले सुनुवाई गुमाएका छन) लाई सोध्यो जससँग अन्य प्रणालीहरूको साथ लामो अनुभव छ। उनीहरूले हामीलाई भने कि हाम्रो क्याप्शन प्रणाली छिटो, अझ सटीक थियो, र कुनै हिज्जे त्रुटिहरू समावेश गर्दैनन्। यो उत्तम छैन तर हामी यसलाई निरन्तर सुधार गर्दैछौं।
त्यसका आधारमा हामी विश्वास गर्दछौं कि स्काइप-आधारित क्याप्शन (र त्यसैले Konnekt क्याप्शन भिडियो भिडियो) उत्तम प्रतिस्थापन उपलब्ध छ। यो छिटो, सहि, र गम्भीर वा गहन श्रवण कमजोरीको साथ कसैको लागि एक ठूलो लाभ हो।
र यो निजी हो। कुनै मानिस सुन्दैन।
यो Konnekt क्याप्शन फोन / भिडियोफोनले अंग्रेजीमा पूर्वनिर्धारित रूपमा क्याप्शन समर्थन गर्दछ।
यदि तपाईंको पहिलो भाषा अ not्ग्रेजी होईन, वा यदि तपाईं अर्को भाषा बोल्ने कोहीसँग फोन कल वा भिडियो कल गर्न चाहनुहुन्छ भने चिन्ता नलिनुहोस्:
यो Konnekt अन्य भाषाहरूमा क्याप्शन गर्न सक्दछ, जस्तै जर्मन, स्पेनिश, फ्रान्सेली, इटालियन, जापानी, पोर्तुगेज, रूसी, चीनियाँ र अधिक।
त्यसोभए, जो व्यक्ति तपाईंसँग बोल्दै छ उसले / उनीहरूको पहिलो भाषामा बोल्न सक्छ।
यो केहि नयाँ हो, जुन अपरेटर-आधारित क्याप्शन सेवाहरू द्वारा समर्थित छैन।
तपाईं अन्ततः ती विदेशी नातेदारहरू, वा स्थानीय साथीहरूसँग तपाईंको मनपर्ने भाषामा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी भाषाहरूको पूर्ण सूची उपलब्ध गराउँदछौं। यदि तपाईं पर्खन सक्नुहुन्न भने, हामीलाई भन्नुहोस्।
आंशिक र पूर्ण बहिरापन
अतिरिक्त चर्को: दुई ठूला आन्तरिक स्पिकरहरू। आईप्याड / ट्याब्लेट ल्यापटप स्पिकर भन्दा धेरै ठूलो।
सुपर चर्को: वैकल्पिक पावर बाह्य स्पिकर।
श्रवण-एड्स, कोक्लियर इम्प्लान्टहरू: संगत। कुनै squeals। श्रवण-सहायता लूप / एम्पलीफायरको लागि अडियो आउटपुट।
बज: भिडियोफोनले पकेट भाईब्रेट गर्न सक्दछ, जब कसैले कल गर्दछ। अतिरिक्त लागत।
रोशनी: भिडियोफोनले अन्य कोठामा बत्तीहरू सक्रिय पार्न सक्छ, जब कसैले बोलाउँछ। अतिरिक्त लागत।
साङ्केतिक भाषा: 1- तरीका वा 2- मार्ग साइन भाषा, र नि: शुल्क Auslan भिडियो-रिले सेवा समर्थन गर्दछ।
ओठ पढ्ने: उच्च गुणस्तरको भिडियोले ओठ, अनुहारको भाव, शरीरको भाषा पढ्न समर्थन गर्दछ।
स्क्रिन-साझेदारी: तपाईंको स्काईप सम्पर्कहरू तपाईंको भिडियोफोनमा उनीहरूको स्क्रीन साझा गर्न सक्दछ। फोटो, पाठ, ब्राउजर, सामाजिक मिडिया। जे पनि।
स्वचालित क्याप्शन: कुनै मानव शामिल छैन। गोपनीयता कम ढिलाइ
अन्धो र कम दृष्टि भएकालाई:
उच्च कन्ट्रास्ट रंगहरू: हाम्रो रंग योजना #4 को लागी सोध्नुहोस्
ठूलो स्क्रीन: १ inches इन्च (ट्याब्लेटको क्षेत्रफल २ देखि times गुणा; १,15०० १२..2 इन्च आईप्याड भन्दा पनि ठूलो)
ठूला बटनहरू:6इन्च चौडा सम्म, 200-point मा ठूलो पाठ
ताररहित पहुँच बटन विकल्प: टचस्क्रिन प्रयोग नगरी कलहरू बनाउँनुहोस् र उत्तर दिनुहोस्
चौडा फ्रेम: बनावट वा ब्रेल स्टिकरहरूको लागि कोठा
स्वत: उत्तर: शून्य टच, केवल मनोनीत कलरहरूको आगमन कलहरूका लागि जुन तपाईं मनोनीत गर्नुहुन्छ
गतिशीलता / निपुणता सीमाहरू
हल्लिएको हात भएका र कुर्सी बाउन्ड, ओछ्यान-चालित, वा सार्नको लागि केवल ढिलोसँग:
क्षमता माउस: माउस-अनुकूल कम्पोनेन्ट यन्त्रहरू (जॉयस्टिक, हर्ष-प्याड, हेड-माउस, खुट्टा-माउस) को साथ काम गर्दछ।
प्रतिरोधात्मक टचस्क्रीन: दस्ताने हात, कृत्रिम, दूरबीन छडी, केहि संग काम गर्दछ
VESA-100: भित्ता, छत, डेस्क, कुर्सी वा ओछ्यानमा चढ्न कुनै पनि मोनिटर हात वा टिभी कोष्ठक * प्रयोग गर्नुहोस्।
स्वत: उत्तर: तर केवल मनोनीत कलरहरूको आगमन कलहरूका लागि मात्र तपाई नामांकन गर्नुहुन्छ
पागलपन / सिक्ने कठिनाइ
मेमोरी नोक्सन, डिमेन्शिया, मस्तिष्कमा चोटपटक वा मानसिक अशक्तता भएकाहरूको लागि:
सजिलो: Konnekt ITAC-2017 मा सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता मैत्री उत्पादन जित्यो।
अविश्वसनीय सजिलो: हामीसँग उनीहरूको late ० को दशकमा प्रयोगकर्ताहरू छन्। सम्झनको लागि त्यहाँ केहि छैन।
निजीकृत: Konnekt तपाइँको लागि सबै सेट गर्दछ र स्क्रिन अनुकूलित गर्दछ।
शून्य सेट अप: अन-बक्स र एक पावर आउटलेट प्लग। यो स्वचालित रूपमा इन्टरनेटमा जडान हुन्छ।
स्वचालित क्याप्शन: क्याप्सन सबै कलहरूमा स्वचालित रूपमा सुरू हुन्छ। प्रेस गर्न कुनै बटन छैन।
भाषा: केही डिमेंशिया रोगीहरू आफ्नो पहिलो भाषामा फर्कन्छन्। भिडियोफोनले अन्य भाषाहरूमा क्याप्शन लिन सक्छ।
सेवा परिवर्तन गर्दछ: हामी तपाईका लागि परिवर्तन गर्दछौं, जस्तै नयाँ साथीको लागि कल बटन थप्नेहरू, कसैलाई पनि आवाश्यक पर्दैन।
सबै उमेरका लागि, सबै क्षमताहरू
युवा: From बाट, अनुहारको हावभाव पढ्नेहरूका लागि।
बच्चाहरू, किशोर: जो कोही पढ्न वा हस्ताक्षर गर्न सक्दछ।
वयस्क: घरमा, कार्यस्थलमा, घरबाट काम गर्दै।
स्वतन्त्र: हाम्रो सबैभन्दा पुरानो प्रयोगकर्ता १०104 हो।
केयर होम: भर्चुअल भ्रमण सबै भन्दा राम्रो उपहार हो।
Konnekt क्याप्सन भिडियोफोन र ओठ पठन
चिकित्सा अनुसन्धान र केस स्टडीज
वैकल्पिक क्याप्शन फोनहरू
सिफारिस गर्न कहिले
प्रस्तुति डाउनलोड गर्नुहोस्
क्याप्शन भिडियो भिडियो - टिभीमा देखिएको जस्तो
अन्तर्वार्ता हेर्न: १:२:1 छोड्नुहोस् (१ मिनेट २ seconds सेकेन्ड) भिडियोमा
क्याप्शन भिडियो भिडियोको बारेमा थप
के म यसको पूर्ण सरकारी भुक्तानी संग तिर्न सक्छु? साँच्चै? कसरी?
भिडियो कलहरू किन नियमित कल भन्दा राम्रो छ?
मलाई इन्टरनेट वा फोन सेवा चाहिन्छ?
के म यो किन्न सक्छु? यसलाई भुक्तानी गर्नुभयो? यो परीक्षण?
को हो Konnekt?
सरकार कोष र सहयोगी टेक्नोलोजीहरु
यो Konnekt क्याप्शन भिडियो भिडियो एक प्रकारको सहयोगी टेक्नोलोजी हो जसलाई ए संचार सहायता। यदि तपाईं सुनुवाई कमजोरी वा अन्य अशक्तता हुनुहुन्छ भने, तपाईं सम्भवतः सरकारी कोषका लागि योग्य हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ प्रतीक्षा सूचीहरू छन्। तपाईंले अब कार्य गर्नु पर्छ!
कसरी कोष काम गर्दछ
धेरै Konnekt भिडियोफोन प्रयोगकर्ताहरूले पहिले नै एनडीआईएस वा माईएजेडकेयर कोष प्रयोग गरेर उनीहरूको भिडियोफोनहरू भाँडामा लिएका छन्। केहि XXUMX दिन परीक्षण को लागी आफ्नो कोष प्रयोग गरी भुक्तान गरेको छ।
भिडियोफोन एक हो संचार सहायता, यो एक सहायक टेक्नोलोजीको एक प्रकार हो जसलाई सुन्ने शक्ति, बोलीमा कमजोरी, कम दृष्टि, सीमित गतिशीलता / निपुणता, पागलपन, सिक्ने कठिनाई, वा अन्य अशक्तताको साथ समर्थन गर्न डिजाइन गरिएको छ।
दुबै एनडीआईएस र MyAgedCare (HCP र CHSP) को रकम सहयोगी टेक्नोलोजीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं खुल्ला हुनुहुन्छ भने DVA, कृपया सोध्नुस Konnekt (तपाईंसँग दुई विकल्पहरू छन्)।
वरिष्ठहरु पहिले नै भित्र छ आवासीय वृद्ध हेरचाह (कहिलेकाँही नर्सि home होम वा केयर होम पनि भनिन्छ) सामान्यतया MyAgedCare कोष प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसोभए त्यहाँ यस्तो मौका छ कि तपाईं वा प्रियजनले आवासीय वृद्ध हेरचाहमा जान आवश्यक पर्न सक्छ चाँडै वा भित्र अर्को2वर्ष, कुर्नु हुँदैन। अब लागू गर्नुहोस्। पर्खने समय हुन सक्छ6महिना भन्दा बढी। र कहिलेकाँही स्वास्थ्य चाँडै खस्न सक्छ।
त्यहाँ छ प्रतीक्षा सूची MyAgedCare कोष, र एक निर्धारण प्रक्रिया को लागी ... त्यसैले यदि तपाईं 65 XNUMX भन्दा माथिको हुनुहुन्छ भने, अहिले लागू गर्नुहोस्। मूल्यांकन प्रक्रियालाई ACAS वा ACAT भनिन्छ। MyAgedCare लाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा कुरा गर्नुहोस् Konnekt.
Konnekt एक सरकार कोष छ जानकारी पाना उपलब्ध छ। केवल हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस र हामी तपाईंलाई सुरू गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं। के तिमीलाई थाहा थियो Konnekt छ अनलाइन कुराकानी, यहाँ छ Konnekt वेबसाइट? यो प्रत्येक पृष्ठको तल दायाँ तिर निलो कुरा गर्ने बबल हो।
A क्याप्शन भिडियो फोन समुदायसँग सम्बन्ध बढाउन, सामाजिक अलगाव र उदासीनता जोखिम कम गर्न, घरमा सुरक्षा सुधार गर्न, दैनिक क्रियाकलापहरूको हेरचाह गर्न, रोजगारीका अवसरहरू बढाउन, तपाईंलाई आवश्यक परेको बेला सहयोग प्राप्त गर्न, र परिवार र साथीहरू, सहकर्मीहरूसँग प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न सक्षम गर्न मद्दत गर्दछ। , हेरचाह प्रदायक र चिकित्सा पेशेवरहरू।
एनडीआईएस कोष सामान्यतया तीहरुको लागि हो 65 अन्तर्गत अशक्तता जस्तै सुनुवाई कमजोरीको साथ।
यदि तिमी पहिले नै एनडीआईएस कोष छ, तपाईंको अडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, व्यावसायिक थेरापिस्ट वा अन्य स्वास्थ्य पेशेवर जसले तपाईंको आवश्यकताहरू बुझ्छन् सिफारिस गर्न सक्छ Konnekt भित्र दैनिक बैठक परिणाम ढांचा। सही एनडीआईएस समर्थन आईटम नम्बर प्रयोग गर्नका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
यदि तिमी अझै छैन NDIS कोष छ, NDIS वा स्थानीय NDIS योजना प्रबन्धकलाई सकेसम्म चाँडो आवेदन दिन को लागी सम्पर्क गर्नुहोस्। यस बीचमा, हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं परीक्षण or भाडामा क्याप्सन भिडियो फोन।
MyAgedCare होम केयर प्याकेज (HCP) सामान्यतया ती व्यक्तिहरूको लागि हो 65 भन्दा माथि जसलाई उनीहरूलाई मद्दत गर्न सहयोग चाहिन्छ घरमा बस्नुहोस् or स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न। समर्थनले सहायक टेक्नोलोजी समावेश गर्न सक्छ, जस्तैaKonnekt.
यदि तिमी पहिले नै एउटा होम केयर प्याकेज छ, त्यसपछि नयाँ उपभोक्ता निर्देशित केयर (सीडीसी) रूपरेखा अन्तर्गत, तपाईं निर्णय गर्नुहुन्छ (दिशानिर्देशहरू बीच) कसरी तपाईंको फन्डहरू उत्तम प्रयोग गर्ने भनेर। केवल तपाईंको केयर प्रबन्धक वा सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् जसले तपाईंको प्याकेज प्रबन्ध गर्दछ, र तिनीहरूलाई सम्पर्कमा राख्नुहुन्छ Konnekt.
यदि तिमी अझै छैन MyAgedCare कोष छ, हामी तपाईंलाई दृढ सुझाव तुरुन्तै केयर प्रबन्धक खोज्नुहोस् र आवेदन दिनुहोस् किनकि पर्खाइको समय हुन सक्छ6महिना वा लामो। सम्पर्क Konnekt होम-केयर प्रदायक सुझावहरूको लागि। यस बीचमा, हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं परीक्षण or भाडामा क्याप्सन भिडियो फोन।
के तपाई कसैलाई हेरचाह गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ जो प्राय: एक्लै हुन्छ र खस्नु, वा बिरामी पर्ने खतरामा छ? को Konnekt विश्वसनीय, मनोनीत क्यारियरहरूलाई २-मार्ग भिडियो र अडियोको साथ "चेक इन" गर्न सक्षम बनाउँदछ, अटो-उत्तर प्रयोग गरेर समस्याको अवस्थामा वा आपतकालीन.
अब कार्य गर्नुहोस्!
तपाईको अधिकार हो, एक अष्ट्रेलियाको रूपमा, तपाईलाई समर्थन सेवाहरू र सहयोगी टेक्नोलोजीहरूको पहुँच गर्न तपाईंलाई पूर्ण जीवन बाँच्न मद्दत गर्न र दैनिक क्रियाकलापहरू सजिलोसँग गर्नका लागि। समुदायसँगको जडान महत्त्वपूर्ण छ, र हामी सबैलाई समर्थन लाइनहरू र आपतकालीन सेवाहरूको सहज पहुँचको आवश्यकता छ।
धेरै ढिला नगर्नुहोस्!
भिडियो कलहरू अडियो-मात्र कलहरू भन्दा उत्तम हो। विशेष गरी श्रवण कमजोरी भएकाहरूको लागि।
गैर मौखिक संचार: ओठ पढ्नुहोस्। अनुहारको भाव बुझाउनुहोस्। चाल - ढाल। सा sign्केतिक भाषा प्रयोग गर्नुहोस्। AUSLAN भिडियो रिले प्रयोग गर्नुहोस्। फ्ल्यास कार्डहरू देखाउनुहोस्।
ग्रेटर सुरक्षा: विश्वसनीय परिवार वा हेरचाह-दाताहरू चेक इन गर्न सक्दछ, भिजुअल रूपमा, छनौट-कलर स्वत: जवाफको साथ - तर केवल तपाईंले नामांकन गर्ने कलरहरूको लागि।
यो छ एक व्यक्तिको जीवन बचाउन सहयोग गर्‍यो.
कम सामाजिक अलगाव: सामाजिक अलगाव र एकाकीपन कम निद्रा, उच्च रक्तचाप, डिप्रेसन, डिमेन्शिया र विकृतिसँग जोडिएको छ। स्वास्थ्य जोखिमको रूपमा, सामाजिक अलगाव धूम्रपान वा मोटाई भन्दा खराब छ। को बारे मा अधिक जान्नुहोस् सामाजिक अलगाव वा हाम्रो ATSA-2018 सम्मेलन प्रस्तुतीकरण पढ्नुहोस् जुन हामीले क्वीन्सल्याण्डमा वितरण गरेका थियौं।
कम डिप्रेसन जोखिम: गम्भीर श्रवण कमजोरी भएकाहरूका लागि डिप्रेसन (सांख्यिकीय रूपमा) बढी जोखिम हो। एक मेडिकल पत्रिकामा 2019 मा प्रकाशित एक अध्ययनले देखायो कि भिडियो च्याटले सामाजिक अलगावलाई कम गर्‍यो र आधा जोखिम जोखिम। जसले गैर-भिडियो कुराकानीहरू मात्र प्रयोग गर्थे उनीहरूले डिप्रेसन लक्षणहरूमा कुनै कमी देखाएन। अध्ययन, भनिन्छ ब्लुज हराउन स्काईप प्रयोग गर्दै, नेतृत्व गरिएको थियो डा। Alan Teo, ओरेगन स्वास्थ्य र विज्ञान विश्वविद्यालय मा एक प्राध्यापक।
सुधारिएको संज्ञानात्मक प्रकार्य: २०१ 2015 मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनले देखायो कि भिडियो कलिंगको माध्यमबाट सामाजिक संलग्नता बढ्यो वास्तवमा संज्ञानात्मक समारोहमा सुधार भयो। यो अध्ययन6हप्ता सम्म चल्यो, र दैनिक using० मिनेट दैनिक आमने सामने कुराकानी भिडियो कलिंग प्रयोग गरी। परिणामहरू यत्तिकै सकारात्मक थिए कि अल्जाइमर रोग वा डिमेन्शियाका अन्य प्रकारका पीडितहरूका लागि, र डिमेन्शिया नभएकाहरूका लागि, 30-वर्षको फलो-अन अध्ययन राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थानले दीर्घकालीन फाइदाहरूको लागि लगानी गरेको छ। जो जोखिममा पर्न सक्छ)। अध्ययन लेखकहरूले अनुसन्धान पत्रमा सुझाव दिए कि भिडियो कलिंग डिमेन्शियाको रोकथाम र हस्तक्षेप / उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विस्तृत पढ्नुहोस् चिकित्सा अनुसन्धान कागज डा। डज र टीम द्वारा, वा कसरी मद्दत गर्ने सिक्नुहोस् डिमेंशिया रोकथाम.
प्रयोग गर्न Konnekt क्याप्शन भिडियो भिडियो:
कुनै फोन सेवा आवाश्यक छैन: तपाईलाई सक्रिय फोन सेवा चाहिदैन। भिडियोफोनले दुबै भिडियो कलहरू र नियमित फोन कलहरू इन्टरनेट प्रयोग गरेर प्राप्त गर्दछ।
हाम्रो धेरै Konnekt भिडियोफोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा, तिनीहरूको मोबाइल फोन सेवा, वा दुबै रद्द गर्दछ।
इन्टरनेट चाहिन्छ: भिडियोफोन ईन्टरनेटमा जडान गर्न आवश्यक छ। यसले भिडियो कल, नियमित फोन कल, र क्याप्शनको लागि इन्टरनेट प्रयोग गर्दछ।
कुनै पनि प्रकारको इन्टरनेट ठीक छ: तपाईं कुनै पनि प्रकारको ईन्टरनेट जडान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ADSL, केबल, NBN, अप्टिकल, वा मोबाइल इन्टरनेट। अष्ट्रेलियामा कहिलेकाँही इन्टरनेट ब्रॉडब्यान्ड भनिन्छ ... यो उही चीज हो।
यो NBN को साथ काम गर्दछ: हो, यो कुनै पनि प्रकारको NBN इन्टर्नेट जडानको साथ काम गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको NBN सेवा मात्र एक NBN भ्वाइस सेवा मात्र होईन। निश्चित गर्नुहोस् कि यसले NBN डाटा समावेश गर्दछ। अष्ट्रेलियामा यस बारे धेरै भ्रम छ। धेरै मानिसहरू एनबीएनसँग डराउँछन् र हामीलाई भन्छन् कि उनीहरू "एनबीएन चाहँदैनन् किनभने उनीहरू इन्टरनेट चाहँदैनन्।" र धेरै व्यक्तिहरूले बुझ्दैनन् कि तपाईंसँग NBN भ्वाइस-मात्र सेवा हुन सक्छ जसमा इन्टरनेट डाटा समावेश छैन। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, सम्पर्क Konnekt र हामी मद्दत गर्न सक्छौं।
थोरै इन्टरनेट डाटा मात्र प्रयोग गर्दछ: विडियोफोनले कडाई कुनै इन्टर्नेट डाटा प्रयोग गर्दछ, भिडियो कलिंगको लागि पनि। हाम्रा About 85% प्रयोगकर्ताहरूले डाटाको प्रत्येक महिना GB जीबी भन्दा कम प्रयोग गर्दछन्। तिनीहरू जो केवल नियमित फोन कलको लागि आफ्नो भिडियोफोन प्रयोग गर्दछन् पनि कम डाटा प्रयोग गर्दछ - सामान्यतया प्रति महिना १ वा २ GB भन्दा कम।
वाइफाइ वा वायर्ड: भिडियोफोनले तपाईंको मोडेम / राउटरमा वाइफाइ मार्फत जडान गर्दछ वा कुनै नियमित नेटवर्क केबल प्रयोग गर्दछ (कहिलेकाँही ईथरनेट ल्यान केबल वा सीएटी6केबल पनि भनिन्छ)। चिन्ता नलिनुहोस्: हामी केबल आपूर्ति गर्न सक्दछौं, हामी तपाईंलाई भरपर्दो मोडेम / राउटरको साथ मद्दत गर्न सक्दछौं, र हामी भिडियोफोन उपलब्ध गराउनु अघि हामी Wi-Fi सेट अप गर्न सक्दछौं।
कम लागतको सिफारिश: यदि तपाइँ अरू केहिको लागि इन्टरनेट प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाइँले प्रति महिना $ 14.95 (4GB) वा $ 19.95 प्रति महिना (5GB) को लागी एक प्री-भुक्तान ईन्टरनेट योजना प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई कहाँ सोध्नुहोस्। कुनै सम्झौता छैन! महीना-महिना। त्यसोभए यदि तपाईं ईन्टरनेट प्लस टेलिफोनको साथ अवस्थित योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाईं आज भन्दा कम तिर्न असफल हुन सक्नुहुन्छ।
Konnekt व्यवस्थित इन्टरनेट: तिनीहरूको लागि जो मोडेम र सिम कार्डको साथ फिडल गर्न चाहँदैनन् वा शीर्ष-अपहरू र योजना परिवर्तनहरूको बारेमा चिन्ता गर्दछन्, Konnekt तपाइँको लागी तपाइँको इन्टरनेट को सेट अप र प्रबंधन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले समावेश गर्दछaअति विश्वसनीय मोडेम / राउटर जुन केवल कार्य गरिरहन्छ, त्यो तपाईंको भिडियोफोनको रूपमा उही कोठामा बस्नेछ, प्राथमिकता रूपमा विन्डोको नजिक।
BYO Internet: यदि तपाईंसँग पहिले नै ईन्टरनेट योजना छ जुन तपाईंसँग खुशी हुनुहुन्छ, Konnekt वाइफाइ मार्फत स्वचालित रूपमा जडान गर्नको लागि तपाईंको भिडियोफोन सेट अप गर्न सक्दछ। यदि तपाईंसँग बन्डल / योजना छ जसले तपाईंलाई फोन र इन्टर्नेट सेवा दिन्छ, त्यसपछि एकचोटि तपाईंले आफ्नो भिडियो कलको लागि भिडियो भिडियो प्रयोग गर्नुभयो भने, तपाईं कम लागतको बन्डल / योजनामा ​​स्विच गरेर पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ जुन असीमित फोन कलहरू समावेश गर्दैन। (उदाहरण को लागी) थप रूपमा, तपाईं आफ्नो कल लागतहरू बचत गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईंको भिडियोफोन योजनाले ल्याण्डलाइनहरूमा असीमित कलहरू, स्काईप प्रयोग गर्ने मोबाईलमा असीमित कलहरू, र वैकल्पिक रूपमा, अस्ट्रेलियाका मोबाइलहरूमा थोरै अतिरिक्त कल गर्दछ।
त्यसैले सारांशमा: तपाईंलाई फोन सेवा आवश्यक पर्दैन। तपाईंलाई इन्टरनेट सेवा चाहिन्छ। र Konnekt तपाइँलाई तपाइँको आवश्यकताको लागि सबै भन्दा राम्रो मूल्य इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
तपाईं एक अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ Konnekt क्याप्शन फोन / भिडियोफोन अब। थप सुविधाहरू सफ्टवेयर अद्यावधिकहरूको रूपमा उपलब्ध हुनेछन्, र सामान्यतया स्वचालित रूपमा एक रातमा स्थापित हुन्छन्, कसैलाई उपस्थित हुन वा सामेल हुन आवश्यक बिना। हामी नयाँ हार्डवेयर विकल्पहरूको उपलब्धता पनि घोषणा गर्नेछौं।
अष्ट्रेलियालीहरूले खरिद, भाँडा वा परीक्षणको लागि सरकारी कोष प्रयोग गर्न सक्दछन् Konnekt क्याप्शन फोन / भिडियोफोन:
यदि तपाईंसँग छ भने अझै लागू गरिएको छैन NDIS वा MyAgedCare कोष को लागी, वा यदि तपाईं एक मा छन् प्रतीक्षा सूची, त्यसपछि क्र्याकिंग प्राप्त गर्नुहोस्! हामीलाई कसरी सोध्नुहोस् (तलको फारम प्रयोग गर्नुहोस्)। यस बीचमा, हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं भाडा-किन्नुहोस् आफ्नो Konnekt तपाईंको जेब आउट भुक्तानलाई कम गर्न र तपाईंको सरकारी कोषको अधिकतम प्रयोग गर्न (जब यो तपाईंलाई उपलब्ध हुन्छ)। जब तपाइँको रकम आएको हुन्छ, हामी तपाइँलाई तपाइँको जम्मा फिर्ता गर्न सक्दछौं, क्रेडिट वा तपाइँको भाँडा भुक्तानीको केही अंश फिर्ता गर्न सक्दछौं, र तपाइँ तपाइँको सरकारी कोषलाई तपाइँको भिडियोफोन खरीद गर्न (वा भाँडा किन्नुहोस्) र मासिक सेवा शुल्कको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तिमी पहिले नै सरकार कोष छ, त्यसो भए हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले आफ्नो खरीद गर्नुहोस् Konnekt र तपाईंको 'प्याकेज' को उपयोग गरेर मासिक सेवा शुल्कको लागि पनि भुक्तान गर्नुहोस्।
जोसँग पहिले नै सरकारी कोष छ, वा केवल यसलाई छिटो चाहिन्छ र लामो समयको लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेको लागि सिफारिस गरिएको।
यो Konnekt क्याप्शन फोन / भिडियोफोन आईप्याड भन्दा कम खर्च हुन्छ। यसले सबै सम्पर्कहरू र प्राथमिकताहरूको निजीकरण समावेश गर्दछ। वितरण समावेश गर्दछ। वैकल्पिक पावर बाह्य स्पिकर। अष्ट्रेलियामा: वैकल्पिक साइड टेबल (कालो, सेतो वा काठको रंग)।
मासिक सेवाले असीमित भिडियो कलहरू ढाक्छ। ल्यान्डलाइन फोनमा असीमित कलहरू। तपाईंको सम्पर्कहरूको मोबाइल फोनमा असीमित कलहरू जुन स्काईप अनुप्रयोग चालु छन्। एक फोन नम्बर (उदाहरणका लागि ०२, ० 02, ० 03 वा ० Australia वा अष्ट्रेलियामा)) जुन व्यक्तिले तपाईलाई कल गर्न सक्छन् कुनै पनि फोनबाट, विश्वको कुनै पनि ठाउँमा। IT समर्थन। सफ्टवेयर अद्यावधिकहरू, चुपचाप रातारात, अनचेन्डेटेड। सबै सम्पर्कहरू र प्राथमिकताहरूमा थप / परिवर्तनहरू, हामीद्वारा गरिएको, कसैलाई भ्रमणको आवश्यकता बिना।
सरकार कोष छैन जो को लागी सिफारिश, आवेदन को लागी, या प्रतीक्षा सूची मा छन्।
त्यहाँ एक सानो मासिक शुल्क छ जुन दुबै भाडाको साथसाथ सेवा (माथिको हेर्नुहोस्) लाई पनि समेट्छ। धेरै भाडा फिर्ता योग्य वा खरीद तिरिदिन सकिन्छ… जुन तपाईं सरकारी प्याकेजको लागि पर्खिरहनु भएको छ भने उत्तम छ।
त्यहाँ एक--महिना न्यूनतम र एक फिर्ती योग्य सुरक्षा निक्षेप छ।
वितरण (अष्ट्रेलिया भित्र) सामेल छ। अन्य देशहरूको लागि, कृपया प्रयोग गर्नुहोस् फारम तल।
वैकल्पिक पावर बाह्य स्पिकर। अष्ट्रेलिया भित्र: वैकल्पिक साइड टेबल (कालो, सेतो वा काठ रंग)।
न्यूनतम अवधि पछि, तपाई कुनै पनि समयमा यो फिर्ता गर्न सक्नुहुनेछ, राम्रो कार्य क्रममा, कुनै दण्ड बिना। कुनै निकास शुल्क छैन! हामी निकास शुल्कलाई घृणा गर्छौं।
यदि तपाईं यसलाई छिटो किन्न चाहानुहुन्छ भने, हामी एक भुक्तानी फिगर गणना गर्नेछौं, ताकि तपाईं बचत गर्नुहोस्।
तपाईंको पछि Konnekt पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको छ, मासिक शुल्क केवल सेवा शुल्कमा ड्रप हुनेछ (माथि हेर्नुहोस्)।
परीक्षणले हाम्रो वैकल्पिक पावर बाह्य स्पिकर समावेश गर्दछ।
अष्ट्रेलियाली डेलिभरीहरूको लागि: परीक्षणले वैकल्पिक साइड टेबल पनि समावेश गर्दछ, र - यदि तपाईंसँग इन्टरनेट छैन भने - हाम्रो अत्यधिक विश्वसनीय G जी मोबाइल इन्टरनेट मोडेम / राउटर सिम कार्डको साथ र कम्तिमा GB जीबी पूर्व-भुक्तान गरिएको इन्टरनेट डाटा।
यसलाई डेलिभर गर्नुहोस्, वा यसलाई दक्षिण-पूर्व मेलबर्न वा हाम्रो कुनै एकबाट हाम्रो अफिसबाट उठाउनुहोस् साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय / विदेशी
फिर्ती योग्य सुरक्षा निक्षेप।
योजनाहरू कल गर्नुहोस्
तपाईंको Konnekt क्याप्शन भिडियो भिडियो साथ आउँछ:
नियमित टेलिफोन नम्बर (तपाईको देश र क्षेत्र कोडको विकल्प; अष्ट्रेलियामा तपाईको मनपर्दो ०२, ०,, ० 02 वा ० 03)।
तपाईको योजनामा ​​निर्भर अष्ट्रेलियाली ल्यान्डलाईन फोन र / वा मोबाइल फोनमा असीमित कलहरू। कुनै आश्चर्य छैन।
वैकल्पिक रूपमा, फरक देशमा ल्यान्डलाइन फोनमा असीमित कलहरू, यससँग सहमत भए Konnekt.
असीमित भिडियो कलहरू, स्काईप प्रयोग गर्ने सबैलाई, विश्वव्यापी रूपमा।
तपाईंको सम्पर्कको मोबाइल फोनमा असीमित कलहरू यदि तिनीहरू नि: शुल्क स्काइप अनुप्रयोग चलाइरहेका छन्.
कृपया हामीसँग जाँच्नुहोस् वा यो प्रयोग गर्नुहोस् फारम पछिल्लो मूल्य निर्धारण र विशेषको लागि।
पहुँच बटन (तार वा ताररहित): एक गतिशीलता सीमितता संग उनहरूका लागि (ओछ्यानमा चल्दा वा कुर्सी बाउन्ड)। O POA
इन्टरनेट: अष्ट्रेलियामा, Konnekt तपाइँको इन्टर्नेट सेवा सेट अप र प्रबन्ध गर्न सक्दछ। विवरणका लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, यदि तपाईं आफ्नै इन्टरनेट प्रबन्ध गर्न खुसी हुनुहुन्छ र तपाईं आफ्नो भिडियोफोनका लागि मात्र इन्टरनेट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई कसरी प्रतिमाह १$--15० इन्टरनेट पाउने भनेर देखाउन सक्छौं (तपाईंको भिडियो कलिंगको प्रयोगमा निर्भर गर्दछ; टेलिफोन नम्बरहरूमा नियमित कलहरू प्रयोग गर्नुहोस्) सायद कुनै डाटा)।
यूपीएस: निर्बाध बिजुली आपूर्ति। तपाईंको राख्छ Konnekt र G जी मोबाइल इन्टर्नेट मोडेम घण्टा लाग्दछ, ब्याट्री पावरमा चल्दैछ, एक एको बखत पावर आउटेज! आवश्यक भएकाहरूको लागि अत्यावश्यक आपतकालीन सेवाहरूमा पहुँच पनि एक बिजली आउटेज को समयमा। (नोट गर्नुहोस् कि अस्ट्रेलियामा, NBN का प्राय जसो स्वादहरू बिजुली चल्दा पनी असफल हुन सक्छ; यसैले हामी मोबाइल इन्टरनेटको सिफारिश गर्छौं यदि तपाईंले निर्बाध बिजुली आपूर्ति पाउदै हुनुहुन्छ भने)।
सरकारी अनुदान (अष्ट्रेलिया)
यदि तपाईंसँग सुनुवाई गम्भीर कमजोरी वा बहिरोपन छ भने, तपाईं खरीद, भाँडा किन्न वा परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छaKonnekt, चलिरहेको सेवा सहित, MyAgedCare वा NDIS कोष प्रयोग गरेर। सर्तहरू लागू। कसरी लागू गर्ने बारे मा हाम्रो अघिल्लो उत्तर हेर्नुहोस्, वा प्रयोग गर्नुहोस् फारम तल अब कार्य गर्नुहोस्!
स्थापित 2013: Konnekt एक पूर्ण अष्ट्रेलियाई कम्पनी हो, जुन मेलबर्नको दक्षिण-पूर्वमा अफिसहरू भएको छ।
ग्लोबल बिक्री: Konnekt विकास र बेच्छ Konnekt भिडीफोन र क्याप्शन भिडियोभोन विश्वव्यापी रूपमा अष्ट्रेलिया, बेलायत र युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अफ्रिका, न्यूजील्याण्ड, जापान र एशिया।
Konnekt पुरस्कार जित्यो उत्तम उपभोक्ता मैत्री उत्पादन ITAC-2017 QLD सम्मेलनमा।
बोल्न आमन्त्रित गरियो: Konnekt बोल्न आमन्त्रित गरियो र मेलबोर्नको एटीएसए एक्सएनयूएमएक्स संगोष्ठीमा पेशागत थेरापिष्टहरूको श्रोताको लागि प्रस्तुत गरियो। हामीले चिकित्सा अनुसंधानको नतिजालाई सामाजिक एकाकीपन, डिप्रेशन र भिडियो कलिंग मार्फत आमनेसामने कुराकानीका विशाल फाइदाहरूमा पुर्‍यायौं।
AACTC: जोन नाकुल्स्की, सह-संस्थापक Konnekt, को सहायक अन्वेषक मनोनीत गरिएको थियो AACTC (अस्ट्रेलियन एज एज केयर टेक्नोलोजी सहयोगी) अक्टूबर २०१ 2019 मा। AACTC Menzies स्वास्थ्य संस्थान, QLD मा स्थापित भएको थियो। एएसीटीसीलाई अशक्त भएका बृद्ध व्यक्तिहरूको आवश्यकताको सर्वेक्षण गर्न, सहयोगी टेक्नोलोजीहरूमा अन्तरहरू पहिचान गर्न, र चिकित्सा अनुसन्धान अध्ययनहरूका लागि सिफारिसहरू गर्ने कामको लागि शुल्क लगाइएको छ।
थप जान्न चाहानुहुन्छ? पढ्नुहोस् Konnekt संस्थापक कथा.
कसरी वास्तविक व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने Konnekt
फोन, स्काइप or ईमेल: बस हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् सम्पर्क पृष्ठ तपाईंको नजिकको रिसेलरको लागि। हामीलाई ईमेल गर्न, हाम्रो सम्पर्क फारम भर्नुहोस्।
कुराकानी: जब हामी अनलाइन उपलब्ध हुन्छौं, तपाईंले हाम्रो वेबसाइटको कुनै पनि पृष्ठको तल-दायाँमा निलो कुरा गरिरहेको बबल देख्नुहुनेछ।
म कसरी क्याप्शन भिडियोिंग प्राप्त गर्न सक्छु?
तपाईं एक अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ Konnekt क्याप्शन फोन / भिडियोफोन अब।
अष्ट्रेलियालीहरूले खरिद, भाँडा वा परीक्षणको लागि सरकारी कोष प्रयोग गर्न सक्दछन् Konnekt क्याप्शन भिडियो भिडियो:
यदि तपाईंसँग छ भने अझै लागू गरिएको छैन NDIS वा MyAgedCare कोषको लागि, हामीलाई कसरी सोध्नुहोस् (तलको फारम प्रयोग गर्नुहोस्)। यस बीचमा, हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं भाडा-किन्नुहोस् आफ्नो Konnekt तपाईंको जेब आउट भुक्तानलाई कम गर्न र तपाईंको सरकारी कोषको अधिकतम प्रयोग गर्न (जब यो तपाईंलाई उपलब्ध हुन्छ)। जब तपाइँको रकम आएको हुन्छ, हामी तपाइँलाई तपाइँको जम्मा फिर्ता गर्न सक्दछौं, क्रेडिट वा तपाइँको भाँडा भुक्तानीको केही अंश फिर्ता गर्न सक्दछौं, र तपाइँ तपाइँको सरकारी कोषलाई तपाइँको भिडियोफोन खरीद गर्न (वा भाँडा किन्नुहोस्) र मासिक सेवा शुल्कको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ।
केयर होम्स (आवासीय वृद्ध हेरचाह) र प्रयोगकर्ताहरूको लागि जो सरकारी कोषका लागि योग्य छैनन्, हामीलाई हाम्रा विशेष कार्यक्रमहरू र भूतपूर्व भाँडा विशेषहरूका बारे सोध्नुहोस्।
बहिरो वा गम्भीर श्रवण कमजोरी भएकाहरूका लागि क्याप्शन फोन भएको मानिन्छ अत्यावश्यक। यो तपाईंको जीवन रेखा हो, तपाईंको समुदायमा लिंक, परिवार र साथीहरूमा तपाईंको कनेक्शन।
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् को बारे मा अक्सर सोधिने प्रश्नहरु को लागी Konnekt क्याप्सन भिडियोफोन।
म यसमा रुचि राख्छु Konnekt क्याप्सन भिडियोफोन
म मेरो वितरण ठेगाना को लागी मूल्य निर्धारण गर्दछु
क्याप्शन फोनका लागि सरकारी कोषको बारेमा मलाई भन्नुहोस्
क्याप्शन फोनको बारेमा ईमेल अपडेटहरू प्राप्त गर्नुहोस्
हाम्रो 30- दिन परीक्षण बारे जान्नुहोस्
मलाई उत्पादन फ्लायर पठाउनुहोस् म प्रिन्ट गर्न वा ईमेल गर्न सक्दछु
मलाई ठूलो २० इन्चको स्क्रिन चाहिन्छ
मेरो अन्तिम नाम*
वितरण गन्तव्य (मूल्य निर्धारण को लागी)
प्रश्नहरू? प्रतिक्रिया? विशेष आवश्यकताहरू?
फारम आईडी: ५,, फाराम नाम: क्याप्शन फोन, पोस्ट/पृष्ठ आईडी: ५० 57, पोस्ट/पृष्ठ शीर्षक: क्याप्शन भिडियो फोन, मिति (dmy): 5099/27/11, प्रयोगकर्ता आईपी ठेगाना: २४००: b2021: about को बारे मा अधिक जान्नुहोस् :: ३, एम्बेड यूआरएल: https: // www।konnekt.com.au / क्याप्शन-भिडियो-फोन /, HTTP रेफरर URL:
कुनै न्यूजलेटर छैन (हो वा १ मतलब मलाई न्यूजलेटर ईमेल नगर्नुहोस्)